सपथग्रहणकै दिन मेयर बालेनलाई उपमेयर सुनिताले दिइन् काउन्टर ! (भिडियोसहित) – Annapurna Post News
सपथग्रहणकै दिन मेयर बालेनलाई उपमेयर सुनिताले दिइन् काउन्टर ! (भिडियोसहित)
May 30, 2022 sujaLeaveaComment on सपथग्रहणकै दिन मेयर बालेनलाई उपमेयर सुनिताले दिइन् काउन्टर ! (भिडियोसहित)
काठमाडौं । सोमबार काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले सपथ ग्रहण गरे । सपथ ग्रहण राष्ट्रियसभागृहमा सम्पन्न भएको थियो । सपथग्रहणमा समारोहमा भएका अनेकन गतिविधीमध्ये एउटा कुरा चाहि दर्शकहरुको नजरमा पर्यो । महानगरपालिका उपप्रमुखमा निर्वाचित सुनिता डंगोलले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहणलाई अनौठो रुपमा लिइयो र अहिले अनेकन टिप्पाण्ी भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा नवनिर्वाचित प्रमुख वालेन्द्र साहले सुनिता डंगोललाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्।नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेकी डंगोल गठबन्धनका उम्मेवारलाई पराजित गर्दै महानगर उपप्रमुखमा जित निकालेकी हुन्। बालेनले नेपालीमा सपथ ग्रहण गराउदा सुनिताले त्यसलाई उल्था गरेर नेपाल (नेवारी) भाषामा सपथ खाइन् ।
यही बिषयले सामाजिक सञ्जालमा अनेक टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । कसैले बालेनलाई सुनिताले काउन्टर दिएकी भन्दै टिप्पणी गरेका छन् भने कसैले मातृभाषामा सपथ लिएर राम्रो गरेकी भन्दै अभिव्यक्ती सार्वजनिक भइरहेका छन् । सुनिताले सबै मिलेर काठमाडौंलाई कान्तिपुरी नगरी बनाउने बताएकी छिन्।
यसैबीच, यता काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र साहले पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् । आज ४ बजे नगरकार्यपालिकाको वैठक बस्ने र त्यसको लाइभ प्रसारण गरिने उनको पहिलो निर्णय छ । आज बेलुका ४ बजे नगर कार्यपालिकाको वैठक बस्ने छ ।
बालेनले काठमाडौंको चुनावी अभियानको क्रममा नै महानगरका सबै बैठकहरू पारदर्शी बनाउन लाइभ प्रसारण गर्ने बाचा गरेका थिए । साह मेयर निर्वाचित भएको भोलिपल्ट ओखरपौवास्थित डम्पिङ साइटमा पुगेका थिए ।
त्यहाँ उनले काठमाडौंको फोहोरको समस्या समाधान नगरेसम्म माला र खादा नलगाउने तथा कुनै उत्सव नमनाउने बाचा गरेका थिए । सोही बाचामा अडिग रहँदै उनले आज सपथग्रहणमा माला लगाउन नचाहेका हुन् ।
तारा एयरको विमान दुर्घटना : चालक दलसहित सबै यात्रुको शव भेटियो
सजिलो छैन् हर्क साम्पाङलाईः निर्वाचित भएको हप्तादिन नबित्दै आफ्ना जनप्रतिनिधीलाई एमालेले गर्न लगायो यस्तो हर्कत, चौतर्फी विरोध
म त खुइलिएँ, तपाईंहरुको राजनीतिक अभीष्ट पूरा होस् भन्दै यस्तो स्टाटस लेखे रवीन्द्र मिश्रले
June 24, 2022 suja